ROBINS KHATIWADA: कोलेस्ट्रोलले
कोलेस्ट्रोलले गर्दा हाम्रो युवा जमातलाई एकदमै ठुलो असर पारिरहेको छ । धनाढ्य परिवारको इतिहास हेर्ने हो भने बालपन पहिलानै बच्चाहरुमा जोखिम रहेको पाइन्छ ।
के खाने के नखाने भन्ने कुरा
कोलेस्ट्रोल अण्डा, डेरी उत्पादन, मासु आदि इत्यादिमा पाइन्छ । अण्डा तथा मासुको विशेष भागमा कोलेस्ट्रोल उच्च हुन्छ । माछामा पनि कोलेस्ट्रोल कमै हुन्छ तर, कुनैमा भने बढिनै हुने गर्दछ । खाद्य पदार्थमा कोलेस्ट्रोल कम हुन्छ । यिनिहरुमा– सागपात, फलफुल जस्तैः एभोगाडो, जैतुन, आदि अन्न गेडागुडी, बदाम, ओखर आदि समेटिएको छ ।
तरकारी र फलफुल खाने बानी बसालौं !
एउटा महत्वपूर्ण कुरा के ध्यान दिनु जरुरी छ भने, फलफुल, तरकारी नै कोलेस्ट्रोल कम गर्ने उपाया हैन तर मासुको तुलनामा यसमा कम हुन्छ भन्न खोजिएको हो । मासुको पनि कलेजो, फोक्सो आदिमा बोसो कम हुन्छ तर कोलेस्ट्रोल बढि नै हुन्छ ।
त्यसो भए तपाई आफ्नो कोलेस्ट्रोल कसरी कम गर्नुहुदोरहेछ त ?
आफ्नो कोलेस्ट्रोल कम गर्न आफूले खाने खानाको कोलेस्ट्रोल जाँच गर्नु पनि पर्छ ।
प्राकृतिक उपचार जसले स्वास्थ्यलाई समर्थन र मद्धत गरोस् त्यस्तो किसिमको मात्र गर्नु पर्दछ । जसले हृदयघात जस्ता रोग लाग्नबाट बचाउँछ ।
पशुजन्य खाद्यान्नमा कोलेस्ट्रोल बढि हुन्छ त्यस्तै डेरी उत्पादनहरुमा पनि हुन्छ कोलेस्ट्रोल जसले हाम्रो कोषले मागेभन्दा बढि नै कोलेस्ट्रोल निर्माण गर्दछ । त्यसकारण, आफ्नो खानामा मास जस्तै अन्य खाद्य पर्दार्थको मात्रा २५–३५ प्रतिशतसम्म कम गरौं जसमा बोसोको मात्रा धेरै होस् ।
खाइरहेको खानेकुरामा केही परिवर्तन गरौं जो हाम्रो शरिरलाई चाहिने भन्दा बढि कोलेस्ट्रोल उत्पादन गर्दछ ।
प्राकृतिक रुपमा उत्पादित खाद्यान्नहरुनै स्वास्थ्यको लागि लाभदायक मानिन्छ । कहिले काँही त्यो अभिबलभच धमनीको लागि अतिनै राम्रो पनि मानिन्छ । जैतुनको तेल, बदाम, अबलयबि तेल, ब्खयनबमचय मा mयलयगलकबतगचबतभम बोसो हुन्छ ।
आफ्नो खानामा ाष्दभच समावेश गर्नुहोस् । २०–३० प्रतिशत सम्म घुलनशील ाष्दभच को शेवनले कोलेस्ट्रोल लाई कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
चिनिको मात्रा लाई पनि कम गरौं ।
जस्तै कि हामी दुनियाभरमा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह सुन्छौं रक्सी नखाऔं, चुरोट नखाऔं , वजन घटाऔं, व्यायम गरौं ।